Beazina hirefarefa amin’ny tany ! | NewsMada
Beazina hirefarefa amin’ny tany !
Par Taratra sur 16/02/2017
Na inona lazaina, na inona ambara, tsy mahazo ny fanabeazana sahaza azy ny zaza malagasy. Tsy vao izao fa efa niaina ampolo taona maro ao anatin’io tranga io ny tontolon’ny fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara. Tamin’ny andron’ny fanjanahantany, nampianarina mba ho mpanatanteraka baikom-bahiny ny zaza malagasy. Noferana mafy ny fahalalana natolotra azy ireo tamin’izany…
Taona maromaro taty aorian’ny Fahaleovantena, nampidirina tao anatin’ny fandaharam-pianarana ireo fakofakon-kevitra politika isan-karazany avy any ivelany. Lasa « mpitolona » ny mpianatra sy ny tanora tany an-dakilasy. Ny fotokevitra no nibosesika fa ny fahalalana poakaty. Naroso ny fanagasiana, saingy sarintsariny ihany ka tsy nety tafapaka tany amin’ny mpianatra.
… Noventimbentesina indray ny fanovana sy fanatsara ny fandaharam-pampianarana taty aoriana, saingy toa vao mainka nampitombo ny hantsana manasaraka ny fomba fanabeazan’ny Malagasy ny zanany, ny fahalalana nomena tany am-pianarana. Zaza nobeazina tamin’ny tenindrazany, nanjary niboredidredika tamin’ny tenin’ny hafa. Novolavolaina ho « vahiny » eo amin’ny taniny ny taranaka malagasy.
Raha dinihina ireo rehetra ireo, tsy nifanaraka sy tsy mifanaraka velively amin’ny fanabeazana takina hoenti-mampandroso sy mampivoatra an’i Madagasikara sy ny Malagasy no ampiarina eto hatramin’izay ka hatramin’izao fa toa vao mainka aza manala ilay hambompo sy fitiavan-tanindrazana ao amin’ny tsirairay nandia ny varavaran-tsekoly.
Mila fahasahiana goavana ny fanarenana ireo lesoka ireo. Mila olona tsy matahotra sy afaka mandà ny baikom-bahiny. Olona mahafantatra tsara ny endri-panabeazana fahiny ka mahay mampifanaraka izany amin’ny filana takin’ny firenena sy ny sehatra iraisam-pirenena ankehitriny mba hahafahan’i Madagasikara mandroso.